musha NFL Vatambi Bio Antonio Brown Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts
Childhood Biography inopa Nyaya Yakazara yeAmerican Football Genius inonyanya kuzivikanwa nezita rezita "Tony Toe Tap".
Yedu Antonio Brown Childhood Nhau pamwe neS Untold Biography Chokwadi inounza kwauri nhoroondo yakazara yeakajeka zviitiko kubva paudiki hwake nguva kusvika zvino.
Kuongororwa kweAmerican nhabvu yakagashira inogamuchira kunosanganisira hupenyu hwake hwepakutanga, nhoroondo yehupenyu pamberi pemukurumbira, nhoroondo yemhuri uye hupenyu hwega. Zvikuru zvakadaro, zvimwe OFF uye ON-Screen zvishoma-zvinozivikanwa chokwadi nezvake.
Hongu, munhu wese anoziva nezvemhosva yake yekubatwa chibharo, yaive yakatanga kutaurwa neNew York Times. Zvakare, tinoziva iye pamwe chete Julio Jones zviri pachena kuti ndivo vakanakisa vakapamhama vanogamuchira nguva yavo.
Nekudaro, vashoma chete ndivo vanofunga nezveAlexander Brown's biography, iyo inonakidza kwazvo. Zvino, pasina imwezve ado, ngatitangei.
Antonio Brown Nyaya Yehucheche - Hupenyu hwepakutanga uye Mhuri kumashure:
Kutanga kubva, Antonio Tavaris Brown Sr akaberekwa pazuva regumi raChikunguru 10 kuMiami, muFlorida, United States.
Nyeredzi yeNFL ndiye mwana wekutanga akazvarwa mumubatanidzwa pakati paamai vake Adrianne Moss nababa vake Eddie Brown (aimbove muArena Football Player).
Nezvemhuri yake, Antonio ane nyika yeAmerica yemadzinza madema neAfrica-America midzi.
Kukura muRusununguko City nharaunda yeMiami pamwe nemunun'una wake Desmond Brown, Mudiki Antonio aive nehurema hwevabereki kurera.
Waizviziva here?… Vabereki vake vakaparadzaniswa pakati pema1990 paakanga asina kana makore gumi ekuberekwa.
Antonio akaramba aina amai vake kusvikira vazoroorwazve mugore ra2000. Zvisinei, akaona kudzingwa kwaAntonio pamba pemurume wake mutsva pamusana pekuda kwake kunetsa.
Nokudaro zvakatanga upenyu hutsva hutsinye hwemakore ari kuyaruka akazova asina musha kwemwedzi mitanhatu mumakore ekupedzisira edzidzo yake yekondari.
Antonio Brown Dzidzo:
Zvinonyanya kuzivikanwa pakati pekudzidza kwaAntonio yaive dzidzo yake yekusekondari kuMiami Norland High School muFlorida.
Ndichiri kuchikoro chesekondari Antonio aive mumhanyi ane chinhanho chekutamba nhabvu uye zviitiko zveteki zvakamupa iye 'North Athlete yeGore' zita pa2005 Miami-Dade Gridiron Classic.
Paakapedza kudzidza, Antonio aive muna 2006, akanyoresa kuNorth Carolina Tech kutora makirasi ekugadzirira.
Iko kusimukira kwakave kwakakosha sezvo kufarira kwake kwepamusoro munhabvu pamazuva ake echikoro chesekondari akamuona achirekodha kusaita zvakanaka mudzidzo, izvo zvakazoita kuti atadze kuwana kubvumidzwa kwake kuFlorida State University.
Kunyangwe zvakadaro, Antonio akanga asiri wega wekurega kuzivisa nebhola. Akapedza mwedzi mumwe chete kuNorth Carolina Tech achiratidzira maitiro ekuona maziso ayo akamuona achiwana bhizimusi kuFlorida International University kuMiami.
Antonio Brown Biography - Mugwagwa Kune Mukurumbira Nhau:
Chinhu chiri chose chairatidzika kuva chakanaka nokuda kwaAntonio, uyo akanga akagadzirira kushandisa zvakanaka bhezari yake yaakanga awana kutozosvikira zvishuvo zvake zvakarurama zvadonha sepakiti yamakadhi apo akadzingwa nokuda kwokupinda mumagakava.
Antonio akazova nezvikonzero zvekunyemwerera paakasangana nemudzidzisi wake wenguva imwe chete Butch Jones. Murairidzi, nekuda kwekare, akakoka mukomana wenhabvu akadzingwa kuti aedze.
Antonio aced the tryout kunyangwe achitamba chinzvimbo cheakagashira akagashira, iro basa raive rekunze kune kwake kugona kwekotaback panguva yechikoro chepamusoro mazuva.
Mavhiki gare gare, Antonio akapiwa ruzivo rwokudzidza kuCentral Michigan University mushure mokunge vadzidzisi vaifunga kuti iye zvinokosha.
Zvichienderana nekufungisisa kwavo Antonio akabvisa miitiro inoshamisa inosanganisira kuisa marekodhi ezvinyorwa zvema-single-season yemigumisiro ye 110, 1,198 inogamuchira yadhi, uye mapfumbamwe ekugadzirisa.
Antonio Brown Biography - Kumuka Mukurumbira:
Hupenyu hwakaita kunge hwaimhanyisa kumhanya kuna Antonio uyo akapinda mu2010 NFL Draft asina kupedza gore rake repamusoro. Kunyangwe iye akatariswa pamusoro nezvikwata makumi matatu nezviviri, Pittsburgh Steelers akamusarudza iye senge yavo yechipiri yakagashira inogamuchira
Antonio akaenderera mberi achipa mubairo wekutenda kwakaiswa maari neveSteelers sezvo akabatsira timu kusvika kuSuper Bowl.
Gore rakatevera akazotora vamwe vana vechikwata kuti vave Steelers wechitatu akagashira uye basa rake rakaenda pasina asi zvichizotevera. Vamwe vese, sezvavanotaura, inhoroondo.
Nezve Shameika Brailsford - Antonio Brown Mudiwa:
Antonio Brown murume asina kuroora ane vana. tinokuunzira mashoko pamusoro pehukama hwake hwekare uye hwezvino. Chokutanga chaiva ukama hwake nemukadzi anozivikanwa saShamaika Brailsford.
Antonio akafambidzana nemusikana wekare weMiami akaberekwa kwenguva yakati apo hukama hwavo hwakaita kuti pave nekuberekwa kwevana vaviri, mwanakomana anonzi Antonio Brown Junior nemwanasikana, Antanyiah Brown.
Vaviri ava, zvisinei, vakaparadzana nekuda kwekusawirirana kusingawirirane, Shameika achipomera Antonio mhosva yekurova baba.
Kufamba pana Antonio kwakatanga kufambidzana nomumwe munhu weOhio ainzi Chelsie Kyriss. Musikana iye zvino (Kyriss) anewo vana (Kellen naBrooklyn) kubva paukama hwake hwekare asati asangana naAntonio.
Zvakadaro vasina kuroora, hukama hwavo hwapa kuberekwa kwevana vaviri, Autonomy naAli. Ukama hwavo hwakambotyisidzirwa nekubatana kwaAntonio nemufananidzo we Instagram Jenna Frumes.
Iye, zvakadaro, akateedzera nhanho dzake kudzokera kumba kuna Kyriss, achikurudzira kukura kwe "kufona kunobva kuna Mwari".
Antonio Brown Mhuri Chokwadi:
Antonio Brown akaberekerwa mumhuri ine nhengo ina. Tinokuudza mashoko echokwadi nezvemhuri yake.
Nezve baba vaAntonio Brown:
Baba vaAntonio Eddie Brown ndeye mutambi wenhenda yekare ari kutamba kuAlbany / Indiana Firebirds yeArena Football League (AFL) uye anonzi ndiye mukuru weArena Footballer nguva dzose.
Eddie uyo akaparadzaniswa naamai vaAntonio makore mazhinji apfuura aive akabata zvehunyanzvi zvekuti akange asina nguva yekuve naAntonio chikamu chiri nani chevechidiki.
Nekudaro, zvakawanda zvachinja zvichitevera kusiya basa kwaEddie. Iye zvino ane nguva yemhando yekushandisa nemwanakomana wake uye vazukuru. Maererano naye:
“Nguva inopora maronda. Ini ndinofunga ari kutanga kunzwisisa zvimwe zvinhu zvakawanda asi kwaari iye zvino mupfungwa, anonzwa kuti hapana imwe hombe rutsigiro system pane kuve nababa vake padivi pake.
Uye ndinokudzwa. Ndezvekuvaka tsika iyoyo yemhuri yekuita zvinhu pamwe chete. ”
Nezve Amai vaAlexander Brown:
Adrianne Moss ndiye amai veakakura akagashira. Zvese zvaive zvakanaka pakati pavo asati abvumira kudzingwa kwaAntonio kubva kuimba yemurume wake mutsva.
Neraki, Antonio haasi wekutakura chigumbu sezvo akamboregerera amai vake uye vese vanofamba zvakanaka pamwechete. Maererano naye:
“Hongu munowana mai mumwe chete. Anondida, uye dai ndisina kuenda kuburikidza nezvandakapfuura ndingadai ndisiri pano nhasi uye kuve ndakakura seni. Ndingadai ndisina kukwanisa kutsungirira nemaropafadzo akapihwa kwandiri.
Uye zvakaoma kumukadzi mune mamiriro pakati pemwanakomana nemurume [mutsva]. Ndinoziva vakadzi ne shamwari dzakawanda mumamiriro ezvinhu aya, uye ndinongotarisira kuti vagadzirise hukama hwavo sezvatakaita ini naamai vangu uye hatibate mukwende nezvazvo “.
Nezve mukoma waAntonio Brown:
Desmond Brown ndiye ega hama yakazvarwa yemubatanidzwa pakati pevabereki vaAntonio. Desmond semukoma wake mukuru akatamba nhabvu paMiami Norland chikoro chesekondari. Iye ari panguva yeichi posvo, anomhanya achidzokera kuPittsburgh Panther.
Antonio Brown Biography Chokwadi - Endorsements uye Investment:
Asides kubva mukugadzira $ 17 mamirioni pagore, Antonio haaite isingasviki pamamirioni maviri emadhora kubva kubvumirano yake inobata neT & T / DirecTV, Nike, Soup yaCampbell, Pepsi, NFL Svondo Tiketi uye NRG Energy.
Zvimwe zvinosanganisira izvo zvaakasaina neFacebook, Sprayground mabhegi, Proctor & Gamble Rite Aid, Skittles, Visa uye Oral-B.
Nezve kudyara kwake kwakazvimirira, Antonio ane mari muzvikafu nemachira ehembe kusvika pamadhora makumi matatu emamiriyoni Naira. Hazvina kunaka here izvozvo.
"Sezvo zuva rimwe chete, zvose zvandinoita ndezvebhizimisi savvy, ndiri kufamba-kutenderera bhizinesi. Ini handiri mutambi chete kana mutambi webhuhu. Ndiri kufamba-kutenderera bhizinesi. Ndinofanira kuzvibata nenzira yakadaro. "
Antonio Brown mutambi wenhabvu anozvikurudzira ane nhamba yeJersey 84 inotaura zvakawanda nezve kurudziro yake.
Wakagashira akafara akasarudza makumi masere nemana makumi matanhatu neshanu nekuda kwekuti ka84 ka8 = 4, mhedzisiro inonyora huwandu hwezvikwata zvisina kumuona seanokodzera kuve chikamu chechikwata chavo.
Kufambira mberi kune kuomarara zvinhu zvehunhu hwake Antonio anochengetedza kuvanzika kwake seimwe huku inodzivirira nhiyo dzayo dzichangobva mukuchonywa.
MunaGunyana 2018, akatyisidzira kukuvadza mutori wenhau nekuburitsa nyaya inojekesa hupenyu hwake hwega.
Kutyisidzirwa kwanga kuri mu tweet iyo yakabviswa kwenguva refu naAntonio yakabatwa skrini ne deadspin.com
Antonio ane zvakadaro akakumbira ruregerero kubvuma kuti akapfuura nekure nechiito ichi. Asides iyo yakashata chiito Antonio anogara achinyemwerera uye anotaurika nhabvu mutambi ane anonakidza vhudzi rakachinja sebasa rake.
CHOKWADI KUTI: Thanks for reading vedu Antonio Brown Childhood Story pamwe chete biography nhoroondo. At biography yemwana, isu tinoedza kururamisa uye kururamisa. Kana iwe ukaona chimwe chinhu chisingatarise zvakanaka muchinyorwa chino, ndokumbira utaure kana taura nesu!